လွမ်းမောဖွယ် အလှမှ ရင်မောဖွယ် ဘဝသို့ (အပိုင်း – ၁) - Kachinland News
ဆောင်းပါး January 4, 2013March 15, 2018 မလိဇွပ်
လှပသော ရှုခင်းကို ကြည့်ရှုရခြင်းသည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရသ ကို ခံစားစေနိုင်သကဲ့သို့ လွမ်းမောဖွယ်ခံစား ချက်များကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်၏ အလှဆုံးနေရာဖြစ်သော မြစ်ဆုံသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ မှ ၂၈ မိုင်သာ ဝေးသည် ဖြစ်၍ ရင်မောချင်သူ၊ လွမ်းမောချင်သူ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များသည် ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များ ကြားမှ လှိုင်းတံပိုးနှင့် အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာ စီးဆင်းသည့် မြစ်ဆုံသို့သွားရောက်ကြသည်။
ယခု တည်ဆောက်လျက်ရှိသောမြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းအတွက် အသုံးပြုမည့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ တင်သွင်းလျက်ရှိသည့် ကန်ပိုက်တီလမ်းကို ကေအိုင်အေမှ ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပါက မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ကုန်မာဆိုင်များမှ တွေ့ကရာဘိလပ်မြေများ၊ မြန်မာပြည်ထုတ်သံများကို အသုံးချကာ ဆက်လက်တည်ဆောက် သွားမည်ဟု ယူဆရသည်။ ထိုသို့ကုန်မာဆိုင်မှ ဘိလပ်မြေများ၊ သံများကို အသုံးပြ၍ တည်ဆောက် မည်ဆိုလျင် ရေကာတာ၏ ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုကို လုံလောက်သော အာမခံချက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအနေနှင့် မန္တလေးကျုံးပတ်လည် ပြန်လည်တူးဖော်၍ ကွန်ကရစ်ကန်အဖြစ် ဖော်ထုတ်ပြောင်းလဲစဉ်က အစိုးရထုတ်ပေးသည့် ဘိလပ်မြေ များသည် မြို့ပေါ်ရှိ ဘိလပ်မြေဆိုင် အသီးသီး သို့ရောက်သွားပြီး ထိုဆိုင်မှ ဘိလပ်မြေနှင့်တူသော မြေသားများရောစပ်ထားသည့် ဘိလပ်မြေများကို ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ပြန်လည် ထုတ်ယူကာ ရရှိသည့် အမြတ်များကို ခွဲဝေစားသောက်ကာ မန္တလေးကျုံးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကို ကိုယ်တွေ့သိခဲ့ရသည်။
ထိုကဲ့သို့ တည်ဆောက်ခဲ့သော ကျုံးသည် ရေလှောင်ကန်သာဖြစ်ပြီး ဆည်မဟုတ်ပါ။ ယခု မြစ်ဆုံရေကာတာသည် အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ စီးဆင်းနေသော ရေအား ကိုတားဆီးရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်နိုင်ငံမှတင်သွင်းလာသည့် ဘိလပ်မြေမဆို မြစ်ကြီးနားသို့ ရောက်ရန် ဘူတာပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြစ်ကြီးနားရောက်သောအခါ ထို ဘိလပ်မြေများ၏ အရည်အသွေးပြည့်မီ နေအုံးမည်ဟု အာမခံချက်မရပါ။ ထိုသို့ ဘိလပ်မြေများနှင့် တည်ဆောက် ထားသည့် ရေကာတာသည် ရေရှည် အာမခံချက် မရှိပဲ ပြိုကျခဲ့သည်ရှိသော် အနီးဆုံးတွင်ရှိသော မြစ်ကြီးနားမြို့ကြီး အပါအ၀င် အခြား မြို့ရွာများ ပျက်ဆီးမည်ဖြစ်သည်။ ယင်း အပျက်အစီး ဆုံးရှုံးမှုကို မည်သူက တာဝန် ခံပေးမည်ဆိုသည်မှာ မေးခွန်းတခုဖြစ်ပါသည်။
ရေကာတာကြီး ပြီးဆုံးသွားပါက နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များအနေနှင့် မြစ်ဆုံ၏ သဘာဝအလှအစား ရေရှည်အတွက် အာမခံချက်မရှိသည့် ရေကာတာကို ဒေသခံလူမျိုး များကို စိုးရိမ်သနားစိတ်နှင့် လာရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ လွမ်းမောဖွယ်အလှအစား ရင်မောဖွယ်များကို တွေ့ မြင်ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ မြစ်ဆုံအလှ နေရာတွင် အစားထိုး ၀င် ရောက်လာမည့် အန္တရယ်များပြီး အာမခံချက်မရှိသည့်လူနေမှုအတွက် ရင်မောလှပါသည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းသည် ပြည်ထောင်စု ဟု ခေါ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ရည်ရွယ်သော စီမံကိန်း ဖြစ်သည်မှာသေချာ၏လော။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မှအာလုံး အပြင်းအထန်း ၀န်းဝိုင်း ကန့်ကွက် နေသည်. ကြား မှပင်၊ လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရ က မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်နေရ သည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ မြစ်ဆုံရေကာတာကြီး ပြိုကျ ခဲ့သော် ထိုဒေသခံ လူမျိုး များမျိုးတုံးပျောက်ကွယ် သွားနိုင်သည်မှာ သချာင်္သီအိုရီ ထုတ်ပြရန် မလိုပါ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်ဆုတ်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ခဲ့သော စတီးဝဲလ်လမ်းမကြီးသည် လီဒိုမြို့ထိ ဆက်သွယ်ထားသည် ဖြစ်၍ လီဒိုလမ်းမ ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုလမ်းမကြီးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပြုပဲ သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာလှပါပြီ။ လေယဉ်ပေါ်မှ ကြည့် လျင်လှပသော သစ်တောကြီးများကြား ပေတံတစ်ချောင်းချထားသကဲ့သို့ ဖြောင့်တန်း သောလမ်းမကြီးကို ကြည့်ရသည်မှာလည်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
ဒေသခံများသည် သစ်တော တန်းကြီးကို မှီခိုရင်း တောင်ယာခုတ်လယ်လုပ်ခဲ့သည်မှာလည်း နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ ဒေသခံများ၏ လယ်ယာမြေများမှာ အစိုးရအဆက်ဆက်မှ အသိပညာပေးခြင်းမရှိခဲ့သဖြင့် ဥပဒေနှင့် အညီ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာရွက် စာတမ်းများ မရှိကြပေ။ ယခုတွင်တော့ ထိုနေရာများကို ယုဇနကုမ္မဏီမှ လမ်းတစ်ဖက်လျင် ၄ မိုင်စီ အစိုးရထံမှ အခွင့်ယူပြီး စက်ယန္တယားများ၏ အကူအညီဖြင့် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းဖျက်ဆီးပစ်သဖြင့် ကန္တာရသဖွယ်ပြောင်ရှင်း နေပြီဖြစ်သည်။ ဒေသခံများ၏လယ်ယာမြေများကိုလည်း သိမ်းယူကြပါသည်။ ဒေသခံများမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရထံသို့ တိုင်ကြား နိုင်ခြင်း မလုပ်နိုင်ကြပါ။ တိုင်ကြားမှုပြုသည့် တဦးနှစ်ဦးကိုလည်း လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ အသွင်ကူးပြောင်းသည်ဖြစ်၍ စက်မှုလယ်ယာကို အားပေးရမည်ဟူသော အဖြေမျိုးကို သာပေးလေ့ရှိပါသည်။ စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကိုကြိုဆိုပါသည်။
သို့သော် လူတိုင်းစက်မှုလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ အရင်းရှင် လက်တဆုပ်သာလျင် တတ်နိုင်ပြီး လူအများစုမှာ လယ်ယာအသိမ်းခံရ၍ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းရန် ခက်ခဲလာသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ရွာနီးချုပ်စပ်သာမက နေအိမ်အနီးပါ မကျန် လယ်ထွန်စက်ကြီးများဖြင့် ထွန်ယက်ခြင်း၊ စက်ယန္တယားများဖြင့် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခံရခြင်း၊ ကျေးရွာရှိကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မချန်ပေးခြင်း၊ ယုဇနစိုက်ခင်းသို့ ၀င်လာသည့် ကျွဲနွားများကို အဆိပ်ကျွေးသတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လီဒိုလမ်းမပေါ်နေထိုင်သည့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မျက်ရည်နှင့် မျက်ခွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံ တောင်သူများမှ တတ်နိုင်သူ အချို့က အစိုးရထံသို့ မြေလွတ်မြေရိုင်းများအား နှစ်ရှည်သီးနှံ စိုက်ပျိုးရန် တောင်းဆိုမှုများကိုလည်း ယုဇနလုပ်ကွက်နှင့် မလွတ်ဟု ပြန်လည်ပြောကြားကာ ၁၀၅/၁၀၆ အပါအ၀င်မြေနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ချထားပေးခြင်းမရှိပါ။
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းအပါအ၀င် လီဒိုလမ်းတလျောက်ရှိ သိမ်းဆည်း ထားသည့် လယ်ယာမြေများတွင် ကချင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာပြည်၏ စတုထ္ထစပါးကျီဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထားသော်လည်း အမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးသည်မှ စပါးမဟုတ်ပဲ ပီလောပီနံများသာ ဖြစ်နေသဖြင့် စိုက်ထူထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို အားနာလှပါသည်။
ပီလောပီနံများကို မိုင်ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးထားပြီး ပီလောပီနံအားနိုင်ငံခြားပို့ကုန်အဖြစ် ရောင်းချနိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်ရန်အတွက် ကြိုးစားနေပုံရပါသည်။ ယုဇနကုမ္မဏီအားမေးလိုက်ချင်ပါသည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် မြန်မာပြည်ကြီးသည် ချစ်တီးများအပါအ၀င် အရင်းရှင်၊မြေပိုင်ရှင်များကြောင့် မြန်မာပြည်သားများဒုက္ခရောက်ကြရပါသည်။ ချစ်တီးများ သိမ်းပိုက်ခဲ့ဘူးသော မြေနေရာများသည် လက်ရှိယုဇနမှ သိမ်းပိုက်လိုက်သည့် မြေနေရာများလောက် ကျယ်ဝန်းမှုရှိပါရဲ့လား။ မြေစာရင်းဌာနတွင်တော့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ များကျန်ခဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
လယ်မြေအသိမ်းခံရသူလယ်သမားများ၏ ခံစားချက်သည် ကိုလိုနီခေတ်တွင် ချစ်တီးများကြောင့် ခံစားရသည်များထက်လျော့မည် မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစေချင်ပါသည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် အရင်းအနှီး ထုတ်ပေးကာ အကြွေးဆုံးသော လယ်မြေများကိုသိမ်းသည့် ချစ်တီးများကို အရင်းရှင်မြေပိုင်ရှင်ဟု ခေါ်ကြလျင် ယုဇနကုမ္မဏီ၏ အာဏာအားကိုး လယ်ယာမြေသိမ်းပိုက်မှုကိုတော့ အာဏာရှင်မြေပိုင်ရှင်စနစ်ဟု အမည်တပ်ရမည့် စနစ်သို့ ကူးပြောင်းနေပြီလား . . . သို.မဟုတ် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကြီး အောက် မှ လွတ်မြောက် ကျန်ခဲ့နိုင်သော သူများကို အမြစ်ပြတ် ချေးမှုန်းရေစီမံကိန်းလော… ရင်မော်မိပါသည်။
ယခင်က ဝေဟင်မှ လှပရင်မောစွာခံစားကြည့်ရှုခဲ့သော တောတန်းနှင့် ဖြောင့်တန်းသောလီဒိုလမ်းအား ယခုဝေဟင်မှကြည်လျင် သစ်တောသစ်ပင်ကင်းသော မိုင်ပေါင်းရာချီ ရှည်လျားသည့် ဖုန်းဆိုးမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်ကို ရင်မောစွာတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
View all posts by မလိဇွပ် →
Home လွမ်းမောဖွယ် အလှမှ ရင်မောဖွယ် ဘဝသို့ (အပိုင်း – ၁)